Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka oo Mooshin ka dhan ah ka badbaaday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka oo Mooshin ka dhan ah ka badbaaday
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka oo Mooshin ka dhan ah ka badbaaday
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdulaahi Goodax Bare ayaa maanta waxa ka gudbay mooshin culus oo ay ka keeneen xubno ka tirsan Baaralmaanka Soomaaliya.
Iyaga oo ku eedeeyay Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Mudane Goodax in uusan xilka Wasiirnimo u gudan karin sida loogu doortay, isla mar ahaantaana waxaa ay carabka ku dhufteen in ay doonayaan in Wasiirka xilka laga qaado.
Hasa yeeshe, fadhi ay yeesheen Golaha Baarlaamanka ee Soomaaliya oo ay aad uga doodayeen howlaha Wasiirka, ayaa maanta waxaa ay si aqlabiyad ah ugu codeeyeen in ay kasoo horjeedaan mooshinka ka dhanka ahaa mudane Goodax, iyaga oona siiyay cod aqlabiyad ah taa uu xilka Wasiirnimo kusii heyn karo.
Arintaan mooshinka ee laga keenay Wasiir Goodax ayaa waxaa ay ku soo aaday muda yar ka dib markiii sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya ay u jeediyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud in uu iscasilo hadii kale ay mooshin adag ka geynayaan golaha baarlamaanka Soomaaliya kaas uu xilka madaxweynenimo uu ku weyn doono.
Arintaas ayaa waxaa ka dhashay dareen culus, taas oo gilgishay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, iyaga oo muujiyay walaacooda ku aadan mooshinkaas lidka ku ah horumarka iyo Dowladdnimad Soomaaliya, waxa ayna intaa ku dareen in waqtigaan aan loo baahneyn mooshin ceynkaan ah maadaama dagaal culus lagula jiro kooxda nabad diidka ee Al-shabaab, iyo ay dhaheen maadamaa dhinaca kale dib u dhis balaaran uu kasocdo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaana magaalda Muqdisho.
Ugu danbeyn, saaxada siyaasada ee Soomaaliya ayaa dhawaanahan waxaa kusoo kordhay adeegsiga erayga mooshinka, kaas oo ay xubnaha Baarlamaanku aad u adeegsanayaa iyaga oo maalinnimadii shalay kadoodeen mooshin sidoo kale dhan ka ahaa shirkada Turkiga ee lagu magacaabo Favori. taa oo dib u dhis balaaran ka wado gagida Dayuuradaha caalamiga ee Adan cade international Airpot, Iyaga oo u codeeyay in dib u eegis lagu sameeyo heshiiska ay shirkadaasi ku shaqeyneyso ee Dowladdi hore ay ansixisay.
Previous articlexiisad colaad oo ka taagan Khaatuma Taleex
Next articleDiyaarado nuuca dagaalka ah oo laga leeyahay Dalka Kenya oo duqooyay Jilib Soomaaliya